Juan Francisco Ferrándiz. Kubvunzana nemunyori we Mvura Yekutongwa | Zvazvino Zvinyorwa
Juan Francisco Ferrándiz. Kubvunzana nemunyori weThe Water Trial
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 22/10/2021 12:00 | Hurukuro, Vanyori, Novela
Kutora mifananidzo: Juan Francisco Ferrándiz, Twitter nhoroondo.
Juan Francisco Ferrándiz Iye ndiye munyori wenhoroondo yenhoroondo ine mazita akadai se Maawa erima, iwo murazvo wehungwaru kana Nyika yakatukwa. Muna Kurume wegore rino akatanga iyo yekupedzisira, Kutongwa kwemvura. Ndinotenda chaizvo nguva uye mutsa wekundipa izvi indavhiyu, kwaanotaura nezvake nedzimwe nyaya dzakawanda.
Juan Francisco Ferrándiz. Hurukuro
LITERATURE CURRENT: Yako nyowani nyowani yakanzi Kutongwa kwemvura. Chii chaunotiudza nezvazvo uye iyo pfungwa yakabva kupi?
JUAN FRANCISCO FERRÁNDIZ: El kutonga kwemvura nhoroondo hupenyu hwemurimi wezana remakore rechiXNUMX nezvo isu tichaziva chisina kutsikiswa asi chakakosha chikamu chenhoroondo yedu. Pakati pezviitiko uye zvakavanzika isu tinosvika padanho rinoshamisa: ruramisiro nyowani kune vasina simba uye embryo yeHuman Rights. Inyaya shoma inozivikanwa yenhoroondo yakashandura nyika.
Kunyangwe izvi chokwadi zvaive zvadzidzwa mune degree remutemo, zvaive zvakadaro kuverenga chinyorwa paHuman Rights pandakanzwa kugona kwayo. Aya ndiwo matangiro azvakaita zvese.
JFF: Ndinoyeuka yangu yekutanga riwaya zvakanaka, yaive Sandokanrakanyorwa naEmilio Salgari. Ndakanga ndichiri mwana uye ndakawana bhuku racho kubva kuraibhurari yekanzuru yeguta rangu, Cocentaina. Nhoroondo ndakasungwa (Kwaiva kupwanya kwekutanga kwemuverengi), asi kana tasvika pavhoriyamu yechitatu zvinoonekwa kuti yaive yechikwereti. Ndaienda zuva nezuva kunoona kuti vainge vatoidzorera here asi kwete. Rimwe zuva, mutarisiri weraibhurari, achiona kuora mwoyo kwangu, akakarakadza kuti ndiverenge rimwe bhuku pandakanga ndakamirira. Ipapo akakurudzira mumwe uye mumwe ... Kubva ipapo handina kurega kurava kunyange zvazvo ndichiramba ndakamirira kuti chikamu chetatu cheSanokán chidzoserwe.
AL: Uye kuti munyori mukuru?
JFF: Mubvunzo uyu ndinowanzo bvunzwa uye ndinoomerwa nekuupindura. Chaizvoizvo Handina munyori mukuruZvakanaka, chandinofarira inyaya dzatinogona kugadzira. Miganhu yekufungidzira kwedu.
Kubva Tolkien a Reverte, Pardo Bazán, Vázquez Figueroa, Asimov, Dumas, Umberto Eco, Conrad, Ursula K. Le Guin... Sezvauri kuona iri amalgam ezera uye masitayeraZvakanaka, ndiwo maitiro andinoda kuongorora nyika yezvinyorwa, isina mavara, ndichipfuura nemhando dzakasiyana nevanyori.
JFF: Chokwadi William weBaskerville de Zita rerosi. Iye anomiririra senge chero imwe archetype yemupi chipangamazano; murume akachenjera anotungamira uye anotungamira (kwete chete vamwe vatambi, asiwo muverengi). Ndiye mhando yehunhu hunondinakidza zvakanyanya nekuda kwekugona kusimbisa nyaya.
JFF: Sezvo ini ndakaita typing kosi semwana Ndakafarira kutaipa zvakanyanya kupfuura kunyora nemaokoNdosaka ndichigara ndichinyora pamwe nekombuta. Pamwe iyo yega mania ndeyekuti kana uchinyora zvinyorwa ndinozvifarira zvinyorwa zviri pahwindo zvakafanana nezvakanyorwa, ndiko kuti, nemaindents ayo, miganho, mitsetse yakareba yenhaurirano, font, nzvimbo, nezvimwe.
JFF: Soy owl uye kana ndichigona ndinosarudza kunyora husiku. Ndine kona yangu mune imwe denga remba kubva kumba uye kazhinji chengetedza zvese tsika nenzvimbo yebasa. Asi kubva pane zvakaitika kwandiri ndichakuudza kuti kana pane kufemerwa iwe unogona kunyora mugaraji rakasviba uye ugere pachigaro chepurasitiki. Kune rumwe rutivi, kana pasina kana kuti wakavharwa, ungave watova mudendere rakaisvonaka regondo mumakomo eSwitzerland; hapana tsamba inobuda.
JFF: Sezvo izvo zvinondinakidza iri nyaya, ini ndinoda kuti zviitike mukati nguva dzakasiyana uye nenzira dzakasiyana (ngazvive mumuzinda waMiddle Ages, muMadrid yanhasi kana muchadenga). Injini yehupenyu hwangu kuda kuziva uye kana munyori achikwanisa kuimutsa mandiri, rwendo, chero rwungave ruri, rwunofadza.
Zvakare, senge chero munyori, iwe unofanirwa kugovera nguva yekuverenga kuti uzvinyore iwe pachako, nezvinyorwa, zvinyorwa, nezvimwe. Dzimwe nguva rinova basa rinonakidza remutikitivha.
JFF: Ndichangopedza sainzi ngano Zvinowanikwa, ivo CarterDamon uye ndakatanga nechido chikuru Mubhuku mutengesi de Luis Zueco. Sezvauri kuona, kuchinja kwevakadzi kune dzungu. Ndinewo inofadza zvikuru Ensayo nezve medieval art yakatumidzwa Enchanted mifananidzo naAlejandro García Avilés, kuwanikwa chaiko kuti unzwisise chimwe chezvandinofunga: shandisa pfungwa kuti ugone kuona nyika senge munhu wekare aizoita.
Kana dziri nyaya dziri kutuhwina mumusoro mangu, mhute haisati yapera uye Ini handikwanise kutarisira chero chinhu chenyaya yangu inotevera. Ndinovimba ndinogona kukuudza munguva pfupi.
AL: Iwe unofunga kuti nzvimbo yekutsikisa iri sei?
JFF: Pasina kupokana tazara shanduko maitiro uye paradigm shanduko. Pamusoro pebhuku redhijitari, dzimwe nzira dzekuzorora dzakasvika idzo dzinogovana niche imwechete sekuverenga, ndiri kutaura nezvemasocial network uye mapuratifomu ekushambadzira.
Kuita kwevaparidzi kwave kuri kuwedzera kugoverwa kwemabhuku uye mwedzi woga woga mazana ezvinobudiswa zvitsva zvinobuda, zvizhinji zvezvinoparadzirwa zviduku kudzivisa kurasikirwa. Zvinoreva vanyori vakawanda vane mukana wekubudisa, asi rwendo rwebhuku ipfupi zvikuru, mavhiki mashoma kana mwedzi mishoma, uye mhedzisiro yacho inowanzove isina kunaka.
Nekune rimwe divi, nzira yekusvika nayo nemuverengi haichisiri bhuku rinoratidzwa muzvitoro zvemabhuku asi kuratidzwa kwemunyori pamanetiweki. Ini ndinofunga kuti kubudirira kunowanikwa mune vanyori vane hukuru hwenhau kuvapo.
Zvese izvi hazvisi nani kana kuipa, iko shanduko. Nhoroondo izere neshanduko, padiki kana rakakura, izvo zvinomiririra dambudziko kune vamwe uye mukana kune vamwe.
JFF: Sevamwe vese, ndakatambura kunzwa uku kwekunzwa kuti chokwadi chiri kutsvedza uye imwe yaive ichizvimanikidza. Ndinoyeuka kuti pakutanga akandiudza kuti "izvo hazvizoitiki" kana kuti "hatizosviki kune izvozvo", uye zvichaitika. Kuvharirwa, migwagwa isina vanhu, nhamba yevakafa… Paunofunga nezvazvo, yakasimba.
Ndinoturikira zvakaitika sea drama renhoroondo rakararama mumunhu wekutanga, asi ndinobvuma kuti ndakasara ndiine manzwiro asina kunaka. Handizivi kuti isu tichatora mukana wekumuka kwepasi rino kuti tichinje. Nhasi zvine fashoni kutonga zvakapfuura nechiyero chedu chazvino chehunhu uye kuzvikudza kwakawanda. Ndine mubvunzo, Vachatitonga sei mune ramangwana?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Juan Francisco Ferrándiz. Kubvunzana nemunyori weThe Water Trial
Sangana ne2021 Nobel Prize muMabhuku